Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo ku baaqay in xisbigu ka wadashaqeeyo soo celinta labada musharrax iyo taageerayaashooda cadhooday: Khudbadihii musharaxiinta la doortay | Somaliland.Org
August 26, 2008	Burco (Somaliland.org) – Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa khudbad uu ka jeediyey xidhitaankii Shirka Golaha Dhexe ee xisbiga uga socdey hotelka Plaza ee magaalada Burco, kadib markii loo doortay musharraxa Madaxweynaha ee xisbiga waxa uu ugu baaqay xisbiga isku duubni iyo inay wadajir uga shaqeeyaan sidii loo raadin lahaa, loo raalligelin lahaa, dibna loogu soo celin lahaa musharraxiinta iyo xubnaha xisbiga ee ka maqnaaday shirka maanta, iyaga oo ka cadhooday doorashada.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Siilaanyo oo ugu horeyn halkaa ka hadlay markii loo doortay inuu xisbiga uga tartamo jagada M/weynaha doorashada madaxtooyada ayaa ugu horey u Mahad-naqay xubnaha golaha dhexe iyo shirgudoonka golaha,waxaanu hadalkiisa ku bilaabay: “Waxaan marka hore hambalyo aad iyo aad u balaadhan halkan uga jeedinayaa xisbiga Kulmiye golahiisa dhexe iyo shirgudoonkiisaba. Shirkan golaha dhexe wuxuu ahaa shir ummaddu sugaysay, shir xisbigu sugayay, shir dalka oo dhan iyo dunidaba laga xiiseynayay oo looga fadhiyay waxa ka soo baxa iyo natiijadiisaba. Shirkan golaha dhexe dad badan oo aan jeclayn horumarka Somaliland ama dad badan oo u arkayay in shirkaa waxa ka soo baxa uu saamayta uu cid walba ku yeelanayo ayaa wadnaha farta kaga hayey, qaar badanina rajadoodey qabeen oo Illaahay uga baryayeen in shirkaasi guuleysto iyo xisbigaasi, qaar badanina way ka naxayeen. Maanta waxaan leeyahay waxa aad iyo aad u farxay oo aad mabsuud uga ah intii wanaagga la jeclayd xisbiga, taageerayaashiisa dhabta ah iyo xubnihiisa iyo intii dalka danaynaysey oo dhan baa ku farxay baan leeyahay shirka halkan ka dhacay.
Waxana uu raaciyey, “Inteenna yar cadhootay ama wax yar tirsatayna ay raalli noqdaan. Kulligeenna waxaynu ka wada shaqaynaynaa oo maanta wixii ka dambeeya aynu ku shaqaynaynaa inaynu raadino, doonno, soo celino walaalaheennii aan sidii ay doonayeen wax ugu dhicin. Waynu isa saamaxaynaa, kale ayaynu gacanta is qabsanaynaa, waynu wada hawlgelaynaa, meel baynu u wada jeesanaynaa, dadkeenna iyo dalkeenna ayaynu daacadnimo ugu shaqaynaynaa, waxaynu ku hoggaaminaynaa sharciga iyo dastuurka, waxaynu ku hoggaaminaynaa wixii ummadda danteeda ah. Insha allaahu Illaahayna wuu inagu guuleyn doonaa caam ahaanteen, kulligeenna waxaan Illaahay ka baryaynaa inaynu meel u wada jeesano, dalkeenana kuwii Illaahay ku anfaco, hoggaamintiisana hanta inaga dhigo”. Guddoomiyaha, mudane Axmed Siilaanyo waxa uu ammaan iyo bogaadin gaar ah u jeediyey Prof. Ismaaciil Muumin Aare oo ka mid ahaa musharraxiintii Madaxweynekuxigeenka, balse, isagu doorashada ka hor ka tanaasuley, isla markaana taageeray Cabdiraxmaan Saylici. Waxana uu sheegay in Prof. Ismaaciil iyo taageerayaashiisu ay hore u caddeeyeen inay taageerayaan wixii ka soo baxa shirka, tiina uu ka dhabeeyey. “Rag kale oo badan baan jecelahay oo maanta halkan inagaga maqan inay sida Ismaaciil oo kale yeelaan oo ay inala wadaagaan isu hambalyaynta aynu isu hambalyaynayno,” ayuu yidhi.